लिलिबिलि चैत्र ३० मा आएपछि नेप्टे टिम तनावमा ! - Nepali Cinema News
Home > Nepali > लिलिबिलि चैत्र ३० मा आएपछि नेप्टे टिम तनावमा !
लिलिबिलि चैत्र ३० मा आएपछि नेप्टे टिम तनावमा !
January 29, 2018 Nepali
सुरुमा चैत्र ३० गतेलाई प्रर्दशन मिति तोकेर फेरी त्यो मिति छोडेर २ हप्ता पछाडी पुगेको चलचित्र लिलिबिलि पुनः चैत्र ३० मै फर्किएको छ । बलिउडको सर्वाधीक महंगो भनिएको चलचित्र २.० तोकिएको मिति भन्दा पछाडी सरेपछि लिलिबिलि अगाडी बढेको चर्चा चलेको छ ।
यता चैत्र ३० लाई प्रर्दशन मिति तोकेर प्रचार प्रसार सुरु गरेको चलचित्र नेप्टे भने मर्कामा पर्ने देखीएको छ । पहिले चैत्र ३० मा नेप्टे एक्लै थियो भने अब लिलिबिलि पनि त्यही मितिमै आउने भएपछि नेप्टेको निर्माण पक्ष निकै तनावमा रहेको बुझिएको छ ।
चलचित्र लिलिबिलि लाई मिलन चाम्सले निर्देशन गरेका हुन भने प्रदिप खड्का,प्रियंका कार्की,जसिता गुरुङ्ग यो चलचित्रका मुख्य कलाकार हुन् । त्यसै गरि चलचित्र नेप्टेलाई देबकुमार श्रेष्ठले निर्देशन गरेका हुन्, भने दयाहाङ्ग राई,छुल्ठीम गुरुङ्ग,रोहित रुम्बा लगायत कलाकारले मुख्य भुमिकामा अभिनय गरेका छन् ।
बिगतमा नेपाली नयाँ वर्षमा ३ देखी ४ ओटा नेपाली चलचित्रहरु प्रर्दशन हुने गरेकोमा यसपाली भने अहिले सम्म २ ओटा मात्रै देखीएका छन् । यि दुईको जुधाई पनि सामान्य भने नहुने देखीएको छ । युवा जमातले सर्वाधीक रुचाएका अभिनेता प्रदिप खड्का र अर्का लोकप्रिय अभिनेता दयाहाङ्ग राईलाई स्टारडम जोगाउन निकै सकस हुने देखीएको छ ।